ဆိုမာလီယာသည်နိုင်ငံရပ်ခြားရှိအသက်ရှူကိရိယာဆိုင်ရာပထမ ဦး ဆုံးလိပ်စာဖြစ်သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလောကအာဖရိက252 ဆိုမာလီယာဆိုမာလီယာနိုင်ငံရပ်ခြားအမျိုးသားအသက်ရှူယန္တရား၏ပထမ ဦး ဆုံးလိပ်စာဖြစ်ပါတယ်
03 / 05 / 2020 252 ဆိုမာလီယာ, အာဖရိက, လောက, အထွေထွေ, coronavirus, ခေါင်းစီးသတင်း, နောက်ဆုံးမိနစ်
စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန၏ညှိနှိုင်းမှုအရကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ Baykar, Biosys, Arçelikနှင့် Aselsan တို့တီထွင်ခဲ့သောနိုင်ငံများသို့စတင်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုများအပြီးဆေးသမားများထံမှအမှတ်အသားအပြည့်အစုံကိုရရှိခဲ့သည်။
ဆိုမာလီယာသည်နိုင်ငံရပ်ခြားရှိအဆောက်အအုံများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအသက်ရှူကိရိယာ၏ပထမဆုံးလိပ်စာဖြစ်သည်။ တူရကီအသစ်တစ်ခုကိုအမျိုးအစား (Covidien-19) အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်အများအပြားဒေသခံတွေ, ရန်ပွဲမှယန္တရားအသက်ရှူခြင်းဘယ်မှာဆိုမာလီယာမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစလှေတျတျောkoronavirüsl။ သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan၏ညွှန်ကြားချက်အရပြင်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများသည်ဆိုမာလီနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အကူအညီပေးရေးနှင့် ပတ်သက်. ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်, တူရကီဆိုမာလီယာထံသို့စေလွှတ် "ကျနော်တို့အမျိုးသားနည်းပညာတက္ကသိုလ်အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပါပြီအသက်ရှူ devices တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုမာလီညီအစ်ကို, ညီအစ်မအသက်ရှူပါလိမ့်မယ်။ " ဖော်ပြချက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုနိုင်ငံနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီး Mustafa Varank က“ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်စတင်ခဲ့သောအမျိုးသားနည်းပညာလှုပ်ရှားမှု၏အောင်မြင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တူရကီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုမာလီညီအစ်ကို, ညီအစ်မအသက်ရှူလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလိပ်စာဆိုမာလီကျော်လွန်
တူရကီ, coronavirus (Covidien-19) ၏အသစ်တခုအမျိုးအစားအသက်ရှူယန္တရားဌာနေတိုင်းရင်းသားများအထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုတို့တွင်ကပ်ရောဂါစစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ်ဆိုမာလီယာမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပေးပို့ထားသည်။ ထို့ကြောင့်စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန၏ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ၁၄ ရက်အတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သောပြည်တွင်းအထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအသက်ရှူကိရိယာတပ်ဆင်သည့်ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သည်ဆိုမားလီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အသက်ရှူကိရိယာမရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan၏ညွှန်ကြားချက်အရအမျိုးသားကာကွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနမှပြင်ဆင်သောပစ္စည်းများကို Etimesgut Military Airport ရှိ A 400M အမျိုးအစားလေယာဉ်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။
လေယာဉ်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ၅၀၀၀၀ ဖြစ်သောအထူးကြပ်မတ်ကုသရေးအသက်ရှူကိရိယာမှရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာ၊ ခြုံငုံ။ နှင့်မျက်နှာဖုံးစသည့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိရိယာ ၁၀ ခုရှိသည်။ တူရကီအပေါ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တံခွန်နှင့်ဆိုမာလီယာနှင့်ဆိုမာလီအလံ၏တူရကီဘက်ခြမ်းအဖြစ် Mevlana "ဟုစိတ်ပျက်အားငယ်တာပဲကျော်လွန်ပြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။ အမှောင်ထုရဲ့နောက်ကွယ်မှာနေတွေအများကြီးရှိတယ်။ ” အကူအညီပစ္စည်းများကိုးကားပြီးနောက်လေယာဉ်ပျံသွားခဲ့သည်။
“ ယဉ်ကျေးမှုကိုကျင့်သုံးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်VİCDANစာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်”
သမ္မတအဲဒိုဂန်ကသူ၏တွစ်တာအကောင့်တွင်“ အမျိုးသားနည်းပညာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ထားသောအသက်ရှူကိရိယာသည်ဆိုမာလီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ညီအစ်ကိုများကိုရှူရှိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုသည်မေးခွန်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သြတ္တပ္ပစိတ်သာဖြစ်သည်။ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်သည်ဖိနှိပ်ခံရပြီးငတ်မွတ်သူများနှင့်အတူရှိနေသည်။ Aziz Millim၊ မင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသနားခြင်းကရုဏာလို့ခေါ်တဲ့လေယာဉ်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်။ အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီး Mustafa Varank ကသူ၏တွစ်တာအကောင့်ကိုဝေမျှခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်စတင်ခဲ့သည့်အမျိုးသားနည်းပညာလှုပ်ရှားမှု၏အောင်မြင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ တူရကီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုမာလီညီအစ်ကို, ညီအစ်မအသက်ရှူပါလိမ့်မယ်။ " သူကပြောပါတယ်။
သူ၏လူမှုမီဒီယာမှတ်တမ်းမှ Baykar နည်းပညာကာကွယ်ရေးမန်နေဂျာ Selcuk Bayraktar က“ တူရကီအင်ဂျင်နီယာများတီထွင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းအသက်ရှူကိရိယာများကိုစက်ပစ္စည်းများမရှိသောအစ်မနိုင်ငံဆိုမာလီနိုင်ငံသို့ပို့နေပါတယ်။ အမျိုးသားနည်းပညာလှုပ်ရှားမှုသည်ဤနိုင်ငံများမှမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖိနှိပ်ခံရသူများ၏ငတ်မွတ်သူများ၏မျှော်လင့်ချက်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန၏ညှိနှိုင်းမှုအရသမ္မတအာဒိုဂန်၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော Biosys, Baykar, Arçelikနှင့် Aselsan လက်အောက်ရှိတူရကီအင်ဂျင်နီယာများသည်အမျိုးသားရေးရုန်းကန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသတိပြုမိခြင်းဖြင့်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ရှာဖွေနေ "ငွေရှာဘို့" ဟုအဆိုပါကိရိယာ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်စုဝေးရောက်လာကြ၏ရှည်လျားသကဲ့သို့, ပေါ် diffucult တူရကီမှ assay ပို့ဖြစ်ခဲ့သောကုန်ပစ္စည်းများသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့နှစ်ကြိမ်စျေးနှုန်း 2-3 ရက်အတွင်း၏တိုတောင်းတဲ့ကာလ၌အရပ်ဒေသ၌အခြေတည်သောခဲ့ပင်မှာပြည်ပမှတင်သွင်းရလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက ၀ န်ကြီး ၀ န်ကြီး Varank ကပစ္စည်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြခဲ့သည်။
"တူရကီဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မှလာမယ့်မီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖတ်ခဲ့တယ်။ တူရကီအင်ဂျင်နီယာများသည်စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားရုန်းကန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်တစ်နေ့တာတွင်သူတို့၏ညများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်စေ့စပ်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်ပမှတင်သွင်းရန်ခက်ခဲသော၊ သို့မဟုတ်နှစ်ဆစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားသည့်ထုတ်ကုန်များကို ၂-၃ ရက်ကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းတွင်ဒေသတွင်းသို့ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။ ဤသည်ကိုယဇျပူဇျောနိုငျသောအရာတစ်ခုခုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ကြီးဌာန၌ Biosys ဟုခေါ်သောကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့များဖြင့်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည်အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိရိယာများထုတ်လုပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ အားလုံး 12 ယူနစ်တူရကီအတွက်ထုတ်လုပ်ထားအချို့ဆေးရုံများတွင်အသုံးပြုနေပါသည်သောလေယာဉ်မှူးအဆင့်အထိ။ ငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အစီအစဉ်ဆွဲပြီး 'ငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်' လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ငါတို့ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်
ဤတွင်အထူးသဖြင့် Baykar မှSelçuk Bayraktar သည်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအလုပ်ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးစက်ပစ္စည်း၏ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏ထူထောင်ထားသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်Arçelikကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ရန်သဘောတူခဲ့တယ်။ ၎င်းကိုမြန်ဆန်စွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ခြစ်ရာလိုင်းတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးဤလိုင်းပေါ်တွင်စက်များစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ငါတို့သည်လည်းလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဘို့ဤစက်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကသင့်တော်သည်ဟုယူဆပါကဤစက်ကိုတင်ပို့နိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကကမ္ဘာ့အဆင့်မီကိရိယာတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။
Epsilon-NDT ပြည်ပမှာမီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Continues
cable ကိုကားတစ်စီး Denizli စွန့်စားမှုစိတ်အားထက်သန်၏သစ်ကိုလိပ်စာရှိခဲ့
မနက်ဖြန် Samsun Sivas Kalin မီးရထားလမ်းကိုစီးပွားဖြစ်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းစတင်ပါ
မှီခိုလျှော့ချဖို့ URAYS ပွငျစီမံကိန်း
MHP Ahmet ကာဣနန် Tanrikulu: သူတို့ကရထားကိုနူးညံ့ သိ. ပြည်ပမှာပေးခြင်းနေ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လျှပ်စစ်ရထားသတ်မှတ်မည်စီမံကိန်း (TÜVASAŞ) အတွက်သေက Man စက်ပစ္စည်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
Izmir Metro ပြည်ပမှာဖွင့်လှစ်